Jaakad dhogorta leh
Jaakada Ski Iyo Jaakada Barafka
Dahaarka Oo Down Jacket Parka
Jaakada Dharka Dharka
Jaakada Puffer Iyo Vest
Jaakad biyo-diid ah
Jaakad isku jirta
Jaakada faashad dibadda
Waxaan dhameystirnay oo aan ka gudubnay xisaabinta warshad BSCI ee sanadkan. Dhamaanteen waan ognahay in shahaadada BSCI ay ka faa'iideysato warshadda: 1.Fuliso shuruudaha martida. 2. Hal shahaado oo loogu talagalay macaamiisha kala duwan - waxay yareyneysaa tirada jeer ee iibsadayaasha kaladuwan ay ku kormeeraan warshad kala duwan ...
Isticmaalka dharka kaashka ah
1. Dharka kaashka ah wuxuu leeyahay nuugista biyaha oo aad u fiican farqiga taangigiisa dheehnaana waa mid yara yar, sidaa darteed waxay si gaar ah ugu habboon tahay dharka isboortiga, oo inta badan laga sameeyo dhididka, surwaal, dharka yoga, iwm. waxtarka cadayashada, waxay ca ...
Faa'iidooyinka dharka dib loo warshadeeyay
Iyadoo kor loo qaadayo wacyiga dadka ee ilaalinta deegaanka iyo horumarka tikniyoolajiyadda, maryaha dib loo warshadeeyay ayaa nolosheena soo galay. Shirkadeenu waxay hada isticmaaleysaa dhar dib loo warshadeeyay si ay u soo saaraan dharka. Muddo dheer, alaabada ceeriin ee dharka ayaa inta badan ah fiiloyin isku darma, wh ...
Jaakada Ski, Jaakada maqaarka, Jaakada Ciyaaraha, Jaakada Barafka, Jaakad Ski Dahaaran, Jaakada Ski-ga 80s,